Ku sifeeya diskigaaga adag marka loo eego Windows 10, 8 iyo 7 - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Ku sifeeya diskigaaga adag marka loo eego Windows 10, 8 iyo 7
Faseexidda waxay ka kooban tahay jajabnaanta kooxeed ee faylasha oo ku kala firirsan daaqada si loo wanaajiyo waqtiyada booqashada darawal adag markaad akhrineyso feylasha waaweyn. Si loo khafiifiyo, algorithms-ka balaaran ayaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo meesha jajabinta iyo meelaha disk-ga aan la adeegsan.
Waa maxay kala qaybsanaanta?
Markaad u keydinayso faylka diskka (oo maran saldhiga), dhammaan macluumaadka ku saabsan faylkaas ayaa loo qoraa midba midka kale. Markaad keydinayso fayl labaad, waxay diiwaangelin doontaa kadib faylka koowaad iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha noqotee, markii fayl tirtiro, tani waxay abuurtaa meel madhan oo ku taal diskka. Laakiin feylasha soo socda ayaa buuxin doona "godad", sidaa darteedna waxaa loogu kala firdhin doonaa qaybo faylal ah oo kujira diskka. Tani waa runti run ahaantii maadada adagi waxay leedahay awood balaaran waxayna leedahay faylal fara badan.
Markaa, markii nidaamku helo fayl, madaxa diskku waa inuu maraa dhammaan meelaha faylasha galka loo duubay si ay u awoodaan inay akhriyaan. Tani waxay u tarjumaysaa hoos u dhac ku yimid waxqabadka ...
Kahor intaadan sii wadin, waa inaad ogaataa inaysan duruufo kasta ku jirin inaad khiyaanayso SSD, maadaama ay tani yareyn doonto wax qabadkeeda iyo rajada nolosha.
Haddii aadan hubin in kombuyuutarkaagu leeyahay SSD iyo haddii kale, tixraac buugga mashiinkaaga ama waxyaabaha lagu qeexay.
SSD way ku xaddidan tahay akhriska / qorista, marka nolosheeda way xadidan tahay waqtiga. Mabda'a burburintu waa in la dhaqaajiyo qaybo ka mid ah xogta kombiyuutarkaaga, taas oo keenta in wax badan la akhriyo / qoro. Intaa waxaa u dheer, xakameeha diskka ayaa ku qalabeysan nidaam ka fogaanaya kala-goynta xogta, marka intaas waxaa sii dheer in ay khatar u tahay aaladdaada, jabaq-jabku si buuxda waxtar uma laha diskkaaga.
Nuqulinta, dhaqaajinta iyo tirtirka feylasha waa lama huraan maxaa yeelay nidaamku wuxuu si joogto ah u qorayaa faylalka ku meel gaarka ah. Sidaa daraadeed waa muhiim in la isticmaalo aalad jabsasho, taas oo ah in la dhaho kombuyuutar awood u leh inuu dib u habeeyo faylalka ku yaal diskka adag si "baakadaha" ee faylasha loo kaydiyo si isdaba joog ah si ay u sameeyaan faylal. dheeraad ah "is haysta".
Sidaa daraadeed waxaa lagu talinayaa in si joogto ah loo isticmaalo utility burburinta, taas oo dib u habeyn doonta macluumaadka ku keydsan diskka.
Talooyin loogu talagalay xakamaynta
Aaladda jabinta ayaa adeegsata algorithms-ka si ay dib ugu habeeyaan feylasha diskka sida ugu macquulsan. Qaybaha faylasha ku kala firidhsanaa diskka waxaa loo wareejiyaa oo loo beddelaa meesha bannaan ee diskigu yaal (oo aan loo isticmaalin faylalka) si ku meel gaar ah ka dibna dib loogu dhigo meel ku habboon. Xadgudubka noocan ahi waa wax walba oo aad u fudud maxaa yeelay booska diskiga ah ee la heli karo ayaa muhiim ah (diskkaagu waa inuu lahaadaa ugu yaraan 15% meel bannaan oo bilaash ah oo loogu talagalay hufnaanta dhabta ah ee hawlgalka).
Dhanka kale, haddii xogta wax laga beddelo inta lagu gudajiray kala-jabinta, aaladda waa inay dib u xisaabeysaa sida loogu dhaqaajiyo feylasha si loogula xisaabtamo isbedeladan cusub. Sidaa darteed waa muhiim in la xiro dhammaan codsiyada furan si loo bilaabo baabi'in. Ama nidaamka qalliinka wuxuu leeyahay habab ku socda asalka iyo helitaanka wadida adag (gaar ahaan markii xaddiga RAM ee ku jira nidaamka uusan ku filneyn, maxaa yeelay nidaamku wuxuu abuuraa faylal isku beddelasho).
Sidaa darteed, waxaa si xoog leh lagula talinayaa kombiyuutarada ku shaqeeya Windows, si ay dib ugu bilaabaan hab ammaan ahtaasi waa, xaalad ay kujiraan waxyaabaha qaabeynta ugu yar. Si aad kombiyuutarka dib ugu bilowdo xaalad aamin ah, si fudud u riix furaha F8 kaliya ka dib markii shaashadda bilawga kumbuyuutarka (tirinta RAM iyo helitaanka maqalka) iyo uun ka hor fariinta Bilaabidda Windows.
In Windows 10 / 8 / 7
In Windows 10, guji liiska bilowga ka dibna geli "
", Windows ayaa si toos ah u bixin doonta goynta:
Dooro darawalka, ka dibna riix Isbedel:
Softiweerka saddexaad ee soosocda wuxuu khayaanayn karaa wadistaada adag:
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.commentcamarche.net/faq/58-defragmenter-son-disque-dur-sous-windows-10-8-7
Android - Jooji lambar qarsoon